ကြိုက်မှာတော့..မဟုတ်ပါဘူး.. ~ MSU Portal
10/21/2013 10:55:00 PM Hpyae No comments
ကျွန်တော်တို့..စီနီယာများကော..ကျွန်တော်တို့..၀န်းကျင်..အထိကော..၊ စာမေးပွဲဖြေဘို့ကို..Sea time ပြည့်တာနဲ့..ခုန်ဆင်းလာပြီး..ဖြေသူ..အင်မတန်နည်းပါတယ်..။
Sea time ပြည့်နေ..ကျော်နေတာတောင်..၊ ငါ့မှာ..အတွေ့အကြုံလိုသေးတယ်..။ ဒီလောက်နဲ့ဖြေလို့..မဖြစ်သေးဘူး..ဆိုပြီး..Sea Service ဆက်ယူနေသူတွေ..များပါတယ်..။
သင်တန်း..တက်ကြပါတယ်..။ စိတ်ဓါတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ..အယူအဆ..Professional ဆန်ပါတယ်..။
အခုတွေ့..နေရတဲ့..လူငယ်အများစု (အားလုံးမဟုတ်ပါ)..က..Sea time ပြည့်တာနဲ့..ခုန်ဆင်းလာပါတယ်..။ စာမေးပွဲဖြေဘို့..ကြိုးစားပါတယ်..။
Academic Education နဲ့..သူတို့..ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့..ပညာရေးစနစ်ပုံစံအတိုင်း. .တွေးထား..မှတ်ထား..ပါတယ်..။
အဲဒီ..Mindset အမှားတွေ..ကလည်း.. စာမေးပွဲကျသူ..ရာနှုန်းများစေတဲ့..ထဲမှာ..အဓိက..နေရာက..ပါမဲ့..အချက်..
သက်ဆိုင်ရာ..Term များကို..မသိခဲ့ပါဘူး..။ အဲဒီလို..လူမျိုးတွေကို..စာသင်ရတာ..
ည..အခါ..လသာသာ..၊ ကောင်းကောင်း မသိတဲ့သူကို.. ဇိနတ္ထပကာသနီ..ဖတ်ပြီး..ရှင်းပြနေရသလိုပါဘဲ..။
.Deck Officer တွေ..ဘာလုပ်နေလဲ..မလေ့လာခဲ့သူတွေ..?
စက်ခန်းထဲမှာ..ကြမ်းဘဲ..တိုက်နေပြီး..Engineer Officer တွေ.. ဘာလုပ်နေလဲ ဆိုတာကို..ကူညီဘို့..မေးဘို့..၀န်လေးသူတွေ..။
အဲဒီ..ပေါက်လွတ်ပဲစား..စိတ်ဓါတ် လို့..ပြောလို့ရမဲ့..Mind Set , Behavior, Practice နဲ့..Professional Exam (CoC) စာမေးပွဲ..ဆင်းဖြေတဲ့..အခါ.. အကြိမ်........များမှာ..သေချာပါတယ်..။
.နေမဲ့..အစား..Sea service ကို..ပိုယူခဲ့တာက.. ၊
English စာ လေးကိုလည်း..အားတဲ့အခါ..နည်းနည်း..ဖတ်ပါ..ရေးကြည့်ပါ..။ ၀တ္ထုရေးသလို..အဆင့်မလိုပါ..။ Instruction Manual လေးတွေထဲက..Simple English လောက်ဆို..ရပါပြီ.။ အဆင့်မမြင့်ပါ..။
အဲဒီလို..လုပ်ပြီးမှ..ပိုင်မှ..၀င်ဖြေရင်..၊ ငွေကြေးလေးကလည်း..တောင့်နေ..၊ အသိပညာ ကလည်းမြင့်နေတော့..၊ စာမေးပွဲ..အကြိမ်နဲနဲ နဲ့..အောင်မှာပါ..။
Sea Time ပြည့်ပြီ..ဒေါင်..ဆိုတာ..နဲ့..ဆင်းလာခဲ့..ပါ..။
ကျွန်တော် နံမည်တောင်...မခေါ်တတ်တဲ့..စက်ကြီး.တွေ.. .ပြင်တာကို...မေးနေတယ်..။
ဒေါ်လာ..ထောင်ချီတဲ့..အလုပ်နဲ့..တန်တဲ့. Theory & Practical Knowledge ရအောင်..ရှိအောင်..လုပ်ရမှာ..က..Professional တွေရဲ့..အလုပ်..ပါ..။
Posted in: advice,guide,literature